Pravastatin : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Pravastatin ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Pravastatin ဆိုတာHMG CoA reductase လို့ခေါ်တဲ့အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးကိုတားပေးတဲ့ဆေးအုပ်စုသို့မဟုတ် statins ဆေးအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စရောတွေ(LDL)နဲ့အဆီတွေကိုလျှော့ချပေးပြီးကောင်းတဲ့ကိုလက်စရော(HDL)ပမာဏကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။
Pravastatin ကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျသောက်ပါ။ သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်မှာအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ဆေးပမာဏကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်၊ယခုဆေးကိုလျှော့သောက်ခြင်း၊တိုးသောက်ခြင်းနဲ့ညွှန်ကြားထားသည်ထက်ပိုသောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Pravastatin ကိုအစာနဲ့သို့မဟုတ်အစာမရှိချိန်မှာပါသောက်လို့ရပြီးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ ဆေးကိုနေ့တိုင်းအချိန်တစ်ခုထားပြီးပုံမှန်သောက်ပါ။
Pravastatin ဆေးပမာဏဟာအသက်ပေါ်မူတည်ပြီးကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာဆေးပမာဏလျော့နည်းပါတယ်။ ကလေးဘဝထဲကသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထဲကယခုဆေးကိုသောက်နေတဲ့သူတွေမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဆေးပမာဏပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။
Pravastatin ဟာအစားအသောက်ထိန်းခြင်း၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းခြင်းစသည်တို့ပါဝင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုတိတိကျကျလိုက်နာပါ။
Pravastatinကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Pravastatinဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်များလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Pravastatinကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Pravastatin အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတစ်ခုခု ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးအသုံးမပြုခင် သင့်ဆရာဝန် ကိုပြောပြတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Pravastatin သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများ တွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ယခုဆေးဟာမမွေးသေးတဲ့ကလေးငယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပြီးမွေးရာပါချို့ယွင်းမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဖြစ်ပါကယခုဆေးကိုမသုံးပါနဲ့။ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိလာပါကယခုဆေးသုံးတာကိုရပ်ပြီးဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။ သင်ယခုဆေးသောက်နေစဉ်မှာကိုယ်ဝန်မရအောင်ထိရောက်တဲ့သန္ဓေတားနည်းများကိုသုံးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pravastatin ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPravastatinကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်X လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Pravastatin ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Pravastatin နဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အောက်ပါလက္ခဏာတွေရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။ အရေပြားတွင်အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာနဲ့လည်ပင်းများရောင်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Pravastatin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pravastatinကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pravastatin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pravastatin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pravastatinဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pravastatin ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Pravastatin ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Pravastatinဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Pravastatin. https://www.drugs.com/pravastatin.html. Accessed July 27, 2017
Pravastatin. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-6989/pravastatin-oral/details. Accessed July 27, 2017